Nayakhabar.com: डन्डिफोरले दुख दियो, यसरी हटाउन सकिन्छ सजिलै डन्डिफोर ?
डन्डिफोरले दुख दियो, यसरी हटाउन सकिन्छ सजिलै डन्डिफोर ?
काठमाडौं । युवा उमेरमा डन्डिफोरले खुबै दुस्ख दिन्छ । यही सयमा सुन्दर हुने चाहना अझ बढी हुन्छ, तर धेरैलाई डन्डिफोरले हैरान बनाउँछ । डन्डिफोर आउनु सामान्य प्रक्रिया भए पनि केही यसलाई लिएर अधिक चिन्ता पनि गर्छन् । यसबाट राहत पाउन केही घरेलु उपाय पनि छन् :
अनुहार धोइरहनुहोस् : धुवाँधुलोले अनुहारमा फोहोर जमाउँछ । त्यसैले अनुहार सफा राख्न हरदम प्रयत्न गर्नुुपर्छ । दिनमा कमसेकम तीन–चारपटक अनुहार धुनुहोस् । हरेकपटक फेसवासको प्रयोग जरुरी छैन । सादा पानीले अनुहार धुन सकिन्छ । यसले अनुहारमा तेल जम्न पाउँदैन र अनुहार सफा रहन्छ । साथै डन्डिफोर आउनबाट पनि रोक्छ ।
ननिचोर्नुहोस् : डन्डिफोर आयो भने निचोरिहाल्ने बानी धेरैको हुन्छ । त्यसो गर्नु गलत हो । यसले अझ बढी डन्डिफोर आउने सम्भावना मात्र हुन्न, खत बस्ने खतरा पनि हुन्छ । डन्डिफोरलाई नछुनु नै जाती हुन्छ । यसलाई जति जिस्क्यायो, उति बढ्छ ।
निमको फेसप्याक : डन्डिफोर आइसकेको छ भने निमको फेसप्याक तयार गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । ताजा निमका पात र चन्दन पाउडरको लेप बनाउनुहोस् । यसलाई अनुहारमा लगाएर १५ मिनेटसम्म राख्नुहोस् र फेरि अनुहार चिसो पानीले धुनुहोस् । यसले अनुहारमा चमक त आउँछ नै, डन्डिफोरबाट पनि जोगाउँछ ।
चन्दन पाउडर : चन्दन पाउडरमा गुलाब जल वा पानी मिसाएर अनुहारमा लगाउनुहोस् र केही समयपछि चिसो पानीले धुनुहोस् । यसले अनुहारमा चिसोपना रहन्छ र जलन कम हुन्छ ।
गुलाब जल : छाला विभिन्न किसिमको हुन्छ । यदि तैलीय छाला छ भने सुत्नुअघि अनुहार गुलाब जलले सफा गर्नुहोस् । राति सुत्नुअघि अनुहार धुन नभुल्नुहोस् । खानपान स् डन्डिफोर आउन नदिन खानपानको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । तैलीय खाना कम खानुपर्छ भने तरकारी र फलफूलमा जोड दिनुपर्छ ।